जाडोमा सेक्सः यस्ता छन् चरम आनन्दका तरिकाहरु - Everest Dainik - News from Nepal
जाडोमा सेक्सः यस्ता छन् चरम आनन्दका तरिकाहरु
मौसममा अचानक फेरबदल आएको छ । बुढाबुढीले आगो ताप्ने जोरजाम गर्दैछन् । कतिपय युवाहरुले मदिरा खाने कुरा गर्छन् । केहीले भने यौनान्दको कुरा गर्ने गर्दछन् ।
जाडोमा सेक्स आमरुपमा सबैले खोज्ने विषय हो । घरभित्रै बसेर बाहिर परिरहेको झमझम परिरहेको पानी हेर्दै आफ्नो जोडीसँग बस्न कामना या कल्पना गर्ने समेत धेरै हुन्छन् ।
तर जाडोमा सेक्सका केही तरिका छन जसले तपाईको यौन क्षणलाई चरमतामा पुर्याउन मद्दत गर्छ ।
याे पनि पढ्नुस यी १० बानी जसले बनाउन सक्छ नपुंसक, धेरै गुटखा सेवनदेखि पोर्नोसम्म
१। सेक्सको मतलव शरिरमा कपडा नहुनु हो तर जाडो समयमा कपडा शरिरबाट उतार्नु भनेको कम्ती गारो काम होइन । त्यसैले कपडा खोलेर यौनसम्बन्ध राख्न वातावरण तयार गर्नुपर्छ । पार्टनरले पनि यो मान्ने र कोठामा पनि तातोका व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२। यदि तपाई वाइन पिउन मन पराउनुहुन्छ भने बेडमा योन क्रियाकलाप भन्दा पहिले रेड वाइनका एक एक गिलास तयार गर्न समेत यौन एक्सपर्टहरुले सल्लाह दिएका छन् । रेड वाइन कामोत्तेजनाको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । र दुई जनाबिचको मायालाई थप उत्साहित पार्दछ । तर सीमामा रहेर मात्रै ।
याे पनि पढ्नुस यौन सम्बन्धको आदर्श समय २४ मिनेट, अधिकांश पुरुषहरु टिक्न असफल– अनुसन्धान
३। दिनभर अफिसको कामको थकानका कारण तपाई सेक्सबाट टाढा नहुनुहोस । बरु यसलाइृ प्रभावकारी बनाउन घर गए पछि तातो पानीले नुहाउनुहोस् जसले गर्दा तपाईको थकान कम हुन जान्छ र सेक्सका लागि तयार हुन सक्नुहुने छ ।
४। यौन जीवन सुखद् बनाउन बिछ्याउनाको पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । सफा र न्यानो खालको तन्दाको प्रयोगले तपाईलाई यौन कार्यको लागी उत्प्रेरित गर्न सक्दछ । फोहर बेडिङले तपाईको जोसमा कमि ल्याउन सक्छ यसबाट बच्नको लागी उपयुक्त स्थान तथा कपडाको प्रयोग गर्नु आवस्यक हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस महिलामा स्तनको आकार किन फरक हुन्छ ? यस्तो छ अनुसन्धानको निष्कर्श
यी र यस्ता महत्वपूर्ण कार्यलाई ध्यान दिने हो भने जीवनको एक महत्वपूर्ण पाटो यौन जीवनमा सधै सुखमयी रहन सकिन्छ ।
ट्याग्स: sex in winter, Sexual health
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (सूचीसहित)
नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्काे यात्रा शुरू
विश्वमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या ३ करोड नाघ्यो
कुलमान एक्लैले गर्दा लोडसेडिङ हटेको हैन, पुनर्नियुक्ति गर्न मिल्दैनः प्रवक्ता ज्ञवाली
लाखौं ज्यालादारी गरिब मजदूरलाई प्रत्यक्ष राहत वितरण गर्न प्रचण्डको अपील
औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन: प्रधानमन्त्री ओली